IVermont inceda njani ulutsha ukuba luyeke ukuvota-802Quits
Ikhaya » Uncedo ukumisa ukuvota kolutsha
UKUNCEDA ABASELULA BONKE KWI-ACROSS VERMONT STOP VAPING
I-802Quits yinkonzo esekwe kuphando evela kwiSebe lezeMpilo laseVermont elinokunceda umntwana wakho ukuba ayeke ngempumelelo.
Phantse iminyaka engama-20, iVermont Quitline incede amawaka eVermonters ukubetha iziyobisi ze-nicotine. Ngokufana nokulutha icuba, ukuba likhoboka lemiceli mngeni kulucelomngeni ukoyisa, kodwa ngenkxaso, ulutsha lwakho lunokuyeka ukukhukhumala kwaye luqale ukukhula.
Ukuthetha nomntwana wakho malunga nokuba likhoboka lokuphuma kunokuba nzima, kodwa silapha ukunceda.
Ukuphucula amathuba okuyeka umntwana wakho, kubalulekile ukuthatha inyathelo ngokukhawuleza. Nxibelelana nomqeqeshi oqeqeshiweyo we-nicotine ngoku ukuba imibuzo yakho iphendulwe, funda ngakumbi ngenkqubo yethu kwaye uncede umntwana wakho alungiselele ukuyeka ukuphuma.
Yazi Iimpawu zoTywala
Iipesenti ezingama-50 zolutsha lwaseVermont luzamile ukunyuka
Ngaba ubona utshintsho kwimvakalelo yolutsha okanye kumnqweno wokutya? Ukufumana iikhatriji kunye nezixhobo ongaziboni?
Iimpawu zoLutsha iNicotine Addiction:
Umdla omncinci kwimisebenzi
Iqela elitsha labahlobo
Ukwanda kwesidingo semali
Ukuba uphendule ngo "ewe" kuyo nayiphi na imibuzo, umntwana wakho anganakho ukuba likhoboka le-nicotine, kwaye kubalulekile ukubafumana inkxaso abayidingayo.
¹Uphando lwe-2019 yeVermont yoLutsha yokuZiphatha
Wena noMntwana wakho Anikwedwa
1 e-4 ulutsha lwaseVermont luye lwaphuma kwinyanga ephelileyo
Eli nani liyothusa ngenxa yefuthe le-nicotine kwimpilo yomntwana wakho. Umntwana wakho unokucinga ukuba ukuphefumla kungcono kunokutshaya, kodwa i-vape aerosol inokuqulatha uninzi lweekhemikhali ezingama-31 ezahlukeneyo ezinokwakha kwimiphunga yakho ngokuhamba kwexesha, zibangele ulutsha ukuba lugule, okanye lube lubi.
Nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba ujongane nengxaki yokuphuma wedwa. Abazali apha nakwelaseMelika bafumana inkxaso evela kwiinkonzo ezinje ngee-802Quits. Iqela lethu eliqeqeshiweyo leengcali kunye nezicwangciso eziqinisekisiweyo zinokunceda ulutsha ukuzithemba kunye nezixhobo abazidingayo ukubetha umlutha we-nicotine ngokulungileyo.
Isiyobisi seNicotine ayisiyo mpazamo yomntwana wakho
Iivapes azivelisi umphunga wamanzi ongenabungozi. Zigcwele inikotini yomlutha kakhulu-kwaye i-vape pod enye inokuba nayo yonke ipakethi yecuba.
Uninzi lolutsha alwazi ukuba umphunga uqukethe inicotine kwaye ngexesha abafuna ukuyeka ngalo, sele kudlulile. Banobukhoboka.
Ingqondo yolutsha isaphuhliswa, ke ukubonakaliswa kwe-nicotine kwimiphunga kunokubangela ukwenzakala ixesha elide ngokutshintsha indlela eyakhiwe ngayo i-synapses yengqondo. Oku kunokutshintsha ngokusisigxina ingqalelo yomntwana wakho kunye nokukwazi ukufunda. Ukuthatha inyathelo ngokukhawuleza kunye nokusebenzisana nomntwana wakho ukwenza isicwangciso sokuyeka ukulungelelanisa kubalulekile ekuncedeni bayeke.
Thatha inyathelo ngokukhawuleza
Ngaphandle koncedo, umlutha unokuba mandundu. Nangona kunjalo, ungathatha amanyathelo ukugcina ikamva lomntwana wakho eliqaqambileyo.
Ama-802Quits ayimfihlo kwaye anokuguquguquka, inkxaso ye-24/7 ukuze ilingane nendlela yokuphila yosapho lwakho exakekileyo.
Nxibelelana nenicotine yethu eqeqeshiweyo Yeka abaqeqeshi ukwenza isicwangciso esenziwe ngokwesiko kunye nesicwangciso sokuyekisa esenzelwe umntwana wakho.
Ubomi bam, ukuyeka kwam ™ yinkonzo yasimahla neyimfihlo kwabo baneminyaka eli-13-17 abafuna ukuyeka zonke iintlobo zecuba kunye nokuqhuma.
Ubomi bam, ukuyeka kwam ™ kubonelela ngezixhobo kubazali abafuna ukuthatha inxaxheba ebonakalayo kuhambo lwabo lokuyeka ulutsha. Abathathi-nxaxheba bafumana:
Ukufikelela kwabaqeqeshi bokuPhelisa ukuTuba ngoqeqesho olukhethekileyo kuthintelo lwecuba lokufikisa.
Zintlanu, iiseshoni zoqeqesho lomntu ngamnye. Ukuqeqesha kunceda ulutsha luphuhlise isicwangciso sokuyeka, luchonge izinto ezibangela, lisebenzise izakhono zokwala kunye nokufumana inkxaso eqhubekayo yokutshintsha kweendlela zokuziphatha.